Sawirro: Yaa kusoo baxay doorashadii BF ee maanta ka dhacday KISMAAYO? - Caasimada Online
Home Warar Sawirro: Yaa kusoo baxay doorashadii BF ee maanta ka dhacday KISMAAYO?
Kismaayo (Caasimada Online) – Magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxaa maanta ka dhacday doorashada kuraas ka mid ah xubnaha Golaha Shacabka, iyada oo lagu doortay saddex xildhibaan oo ka mid noqonaya baarlamaanka.
Kursiga HOP127 ayaa waxaa ku guuleystay Dr Axmed Aadan Axmed oo helay 84 cod, halka musharixii la tartamayey ee Cabduqaadir Cabdullaahi Xirsi uu isna helay 84 cod.
Sidoo kale kursiga HOP118 ayaa waxaa kusoo baxay xildhibaan Yuusuf Maxamed Ismaaciil oo loo qaaday cod gacan taag ah, kadib markii uu tanaasulay musharixii la tartami lahaa.
Kursiga saddexaad ee HOP 126 oo aad isha loogu hayey waxaa isna kusoo baxay Xasan Xuseen Maxamed (Eelaay) oo ah wasiirka Gaadiidka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, wuxuuna helay 74 cod, halka musharaxii la tartamayey ee Cabdiraxman Macalin Xuseen uu isna helay 21 cod, sidoo kale waxaa halaabay 5 cod.
Kursigan ayaa ka mid ah labad kursi oo ay kala bedasheen madaxweynayaasha Jubbaland iyo Koonfur Galbeed, kuwaas oo kala yaalla Baydhabo iyo Kismaayo.
Jubbaland ayaa horay u qabatay doorashada kuraas ka mid ah xubnaha Golaha Shacabka, gaar kuwa deegaan doorashadooda ay tahay magaalada Kismaayo ee Jubbada Hoose.
Tallaabadan ayaa qayb ka ah fulinta heshiiskii laga gaaray doorashooyinka Soomaaliya, kadib shirkii Golaha Wadatashiga ee ka dhacay magaalada Muqdisho.
Si kastaba, Soomaaliya ayaa haatan ku jirto xaalad adag oo kala guur ah, taas oo ka dhalatay daaha doorashooyinka dalka oo dib u dhacday muddo hal sano ah.